Qalabka Google AMP ma shaqeynayo? - Halkan waa xalka ka amp-cloud.de - SO
Xayeysiinta Google-AMP ma shaqeynayo? -
Caawinta iyo xalka
Miyaad isticmaaleysaa mid ka mid ah plugins -ka Google AMP , sumadda AMPHTML ama soo -saare AMPHTML si aad ugu abuurto degelladaada bogagga Mobilada Degdegga ah (AMP), laakiin bogagga AMP si fiican uma shaqeynayaan? - Halkan waxaad ka heli doontaa xalal iyo sharraxaadyo ku saabsan sida aad ku heli karto nuqullada AMP ee saxda ah adiga oo kaashanaya amp-cloud.de!
Sababaha ugu badan
Sababta ugu badan ee abuurista bogga AMP u shaqayn weydo waa la'aanta summadaha Schema.org. Generator - ga xawaareysan ee loo yaqaan ' Accelerated Pages Mobile Pages Generator' wuxuu asal ahaan ku saleysan yahay schema.org tags / Micordata tags , oo sidoo kale loo yaqaan "xogta habeysan" .
Maqaallada baloogyada ama maqaallada wararka ayaa sidaas darteed waa inay kujiraan astaamaha saxda ah ee loo yaqaan 'schema tags tags' sida ku cad mid ka mid ah dukumiintiyada soo socda ee schema.org sidaa darteed furitaanka 'AMP' iyo 'AMPHflix tag' waxay u ansixin karaan bogaggaaga si sax ah oo ay u akhrin karaan diiwaanada xogta lagama maarmaanka ah:
Ma jeceshahay bogga AMP?
Haddii bogga AMP -ka laga soo dhexsaaro fiilada AMP ama sumadda AMPHTML ay maqan tahay, tusaale ahaan qoraalka, ama haddii waxyaabo gaar ah aan si fiican loogu soo bandhigin bogga AMP, tan waxaa badanaa sababa summaadaha schema.org oo aan si fiican loo dhigin ama la waayo meelaha xogta qaarkood ee boggaaga asalka ah.
Haddii ay dhacdo khaladaad noocan oo kale ah: Ku habboon bogga internetka ee 'AMP'
Si fudud u raac talooyinka hoose si aad ugu hagaajiso websaydhkaaga koronto-dhaliyaha AMPHflix iyo Google AMP plugins, si abuuritaanka boggagaaga AMP ay ugu shaqeyn karaan si ka wanaagsan fikradahaaga.
Ku hagaaji khaladaadka muuqaalka AMP:
Calaamadaha Schema.org waxaa inta badan lagu meeleeyaa si tusaale ahaan, kaliya ma aha qoraalka maqaalka saafiga ah, laakiin sidoo kale waxyaabo ay ka mid yihiin shaqo wadaag ama shaqo faallo, iwm. Bogga AMP waxaa laga yaabaa inaan si sax ah loo fasiran oo sidaas loo soo saaro si aan habboonayn.
Waxaad ku xallin kartaa tan meelaynta wanaagsan ee summadayaasha Schema.org META adiga oo ku daraya kaliya waxyaabahaas oo runtii ka tirsan qoraalka maqaalka. Sidaa darteed, hubso inaad isticmaasho summadaha xogta micro sida ku cad dukumiintiyadooda si AMP plug-in iyo sumadda AMPHTML ay si sax ah u fasiraan xogta mareegahaaga si looga fogaado khaladaad ku jira muujinta bogga AMP.
Bogga AMP ma laha qoraal?
Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa in boggaaga AMP uusan lahayn wax qoraal ah haba yaraatee. Sababta ugu badan ee tan keenta ayaa ah sumadda Schema.org oo la la'yahay "articleBody" ama adeegsiga khaldan ee maqaalkaBody tag.
Sidaas darteed in qalabka 'AMP plugin' iyo 'AMPHflix tag' ay si sax ah u shaqeeyaan oo ay ka heli karaan qoraalka maqaalkaaga, hubso inaad u isticmaasho Mirco-Data-Tags si sax ah sida ku cad mid ka mid ah dukumiintiyada Schema.org ee kor ku xusan iyo gaar ahaan qoraalka maqaalka iyadoo la adeegsanayo " maqaalka "jirka"
Hubiyaha tag Scheme
Iyada oo la adeegsanayo aaladda tijaabinta shaxda ee soo socota waxaad ku hubin kartaa haddii aad si sax ah u dhex gelisay summadaha summada si diiwaannada xogta adiga muhiimka kuu ah si nadiif ah oo sax ah loo akhriyo.
Astaamaha astaamaha ee loo yaqaan 'schema tag validator' ayaa hubinaya in balooggaaga ama maqaalkaaga warka si sax ah loo calaamadeeyay oo ay ku jiraan xog farsamo oo sax ah si markaa qalabka 'AMP plugin' iyo 'AMPHflix tag' ay si sax ah u shaqeyn karaan:
Qalabka Imtixaanka Xogta Habaysan ee Google
Bogga AMP oo aan lahayn xog habaysan
Xaqiiji bogga AMP iyada oo aan lahayn xog habeysan? - Haddii maqaalkaaga wararka ama maqaalkaaga blog uusan kujirin wax astaamo ah, matoor-dhaliyaha AMPHflix wuxuu adeegsadaa astaamo kala duwan oo HTML ah koodhka isha ee bogga maqaalkaaga si otomaatig ah ugu abuuro bogga AMP ugu habboon uguna ansaxsan maqaalkaaga.